Ebee The Best Museums Na Europe | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > Ebee The Best Museums Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zọ njem Sweden, Zụlite njem Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 27/11/2020)
Ọ bụrụ na ị na-eche ebe-ahụ na nke kacha mma ngosi ihe mgbe ochie na Europe, anyị ị kpuchie! Ma ọ bụ nka, mba, ma ọ bụ ihe okike akụkọ ihe mere eme, ngosi ihe mgbe ochie site na ndepụta anyị na-aghaghị itu n'anya ị.
Ihe ọzọ bụ na, i nwere ike iru a niile ebe ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ ụzọ nke njem. Ka anyị nwere a nso lee anya na nke kacha mma ngosi ihe mgbe ochie na Europe na ebe-ahụ na ha:
Ụlọ ihe ngosi nka nke Louvre, Paris, France
The Louvre pụrụ ịbụ otu n'ime ndị kasị ama ngosi ihe mgbe ochie na Europe na ụwa. Ọ bụ kasị, na-ekpuchi ebe 72,735 mita há nhata. Nke a kediegwu ngosi nka bu ihe karịrị 35,000 ihe na bụ otu n'ime akara nke Paris. Ị nwere ileta ya ma ọ bụrụ na ị na aga Paris ụgbọ okporo ígwè!
Venaria Reale, Turin, Ịtali
The aha nke a n'obí abịa site Latin The eze ịchụ nta bụ, pụtara "eze ichu nta". Na narị afọ nke 17 na nke 18, ọ bụ a isi n'ihi na ịchụ nta njem ndị mmadụ merela nke Duke Charles Emmanuel II. Ugbu a n'obí enchants oge a ọbịa na ya Baroque-style mma. Ị gaghị agbaghara ya ma ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na Turin.
The Museum site Stream, Antwerp, Belgium
The Museum site Stream ma ọ bụ más bụ nnukwu ngosi nka na Antwerp. Ọ bụrụ na ị na-achọ a panoramic echiche, e nwere free ohere ka n'elu ụlọ nke ngosi nka. The mgbagwoju nke más nwekwara a ụlọ oriri na ọṅụṅụ na a Cafe n'okpuru ya. The ngosi nka onwe ya bụ ọmarịcha na uru a nleta ọ bụrụ na ị na-na Antwerp.
Bible, Amsterdam, mba netherland
Ọzọ ngosi nka na Netherlands, na Bible ngosi nka na emi odude ke Amsterdam. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ngosi ihe mgbe ochie na Europe ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụtakwu banyere Bible. Eleta Bijbels enyere ịghọta ihe na mmetụta nke Bible na Dutch otu. Ọ bụ doro anya na a pụrụ iche ngosi nka, mma-ruru eru maka ndị hụrụ ya n'anya okpukpe akụkọ ihe mere eme.
Kunsthistorisches Museum bụ kacha mara nkà ihe ngosi nka na Austria, makwaara dị ka Museum of Fine Arts. Ụfọdụ n'ime ya kasị ama na-egosi gụnyere ọrụ nke Rembrandt, Michelangelo, Raphael, na Rubens. Ọ dị ịtụnanya maka ndị hụrụ nka n'anya na ọmarịcha nka kemgbe mmalite ya 1891. Onye ọ bụla na-eleta Vienna ụgbọ okporo ígwè kwesịrị ime ndokwa ịhụ Kunsthistorisches Museum.
Maka njem na ụmụaka, ọ na-adịghị ga-esi ọ bụla mma karịa MACHmit Children Museum Germany. Ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na Berlin, Jide n'aka na-lelee MACHmit na ya dịgasị iche iche nke na-adọrọ. Ha na-adabara ndị okenye nakwa, na ọtụtụ na-akpali akpali na-eme otú ahụ dị ka ihe art laabu, ebipụta omumuihe, na rịa labyrinth.
Skansen ghe oghe ngosi nka mbụ bụ ụdị ke Sweden. Ọ mepere 1891 na ka toro na-kasị ama ngosi nka na Stockholm. A ọmarịcha echiche site Royal Djurgarden bụ bonus na-eleta Skansen. Na ndị na-n'anya ịhụ Scandinavia-nwa afọ anụmanụ, enwere ụlọ zoo na-egosiputa ha.
The kasị mma ngosi ihe mgbe ochie na Europe na-eche gị. Ọ bụrụ na ị dị njikere na-aga, akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè ugbu a na-enwe na-agba ịnyịnya!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-museums-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#ngosi ihe mgbe ochie	#njem njem	Europe njem	eurotrip	ngosi nka	Njem	njem nleta	njem France	njem njem	nje ndi njem	njem nlegharị anya
Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Zụọnụ Ndụmọdụ, Ingbọ njem njem Turkey, Ụgbọ oloko njem UK, Njem Europe
Ingbọ oloko na Belgium, Zụọnụ njem Czech Republic, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ oloko njem Holland, Inzọ Njem Italytali, Zụlite njem Netherlands, Njem Europe